Global Voices teny Malagasy » Ejipta: Manapaka ny Tsipika Mena; Mampiaka-peo Manohitra ny Tribonaly Miaramila · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jona 2011 10:28 GMT 1	 · Mpanoratra Lilian Wagdy Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Politika
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Revolisiona Ejipta 2011 .
Ny telo dia natao teo anoloan'ny fitsarana miaramila taorian'ny fanamarihana nataon'i El Hamalawy sy Sharaf El Din ho fanoherana izay ambaran'izy ireo fa fanimbazimbàna ataon'ny polisy amin'ireo olona sivily tànany, ary ny fomba mitanila fanaon'ny Fitsarana Avon'ny Miaramila tsikaritr'izy ireo / Supreme Council of Armed Forces (SCAF) manoloana ny revolisiona.
Polisy Miaramila eo ivelan'ny faritra nandritra ny fihetsiketsehana. Sary avy amin'i Sara Carr (CC BY-NC-SA 2.0)
Tsy voalohany amin'ny karazany akory ilay fifamoriana teo anoloan'ny tranon'ny miaramila. Na izany aza, io no goavana indrindra raha isa no jerena (nanodidina ny 500 ny olona nandray anjara tamin'ilay fihetsiketsehana) ary io no fotoana voalohany nandrenesana hiaka sahisahy sy tsy amin-tahotra nanoherana ny tafika sy ny Field Marshall Mohamed Hussein Tantawi, sady nanakoako tokoa teny akaikin'ny faritra miaramila, izay toy ny mari-pamantarana azy irery mihitsy raha io tranobe io, izay nomena anarana hoe C28.
Ary raha nionona fotsiny tamin'ny fandrakofana somary mitapo-drano ireo media tranainy rehefa miresaka ilay fihetsiketsehana, ireo mafàna fo amin'ny media sosialy kosa, indrindra tao amin'ny Twitter, dia nitondra fanavaozam-baovao hatrany mikasika ilay fihetsiketsehana ho an'ny mpanjohy azy ireo tamin'ny bitsika, saripika ary lahatsary.
Tao amin'ny Twitter, ilay mafàna fo ,Gigi Ibrahim (@GSqaure86) dia niteny fa :
“Tsy nitsahatra na indray mandeha akory aza ny hiaka nanomboka tamin'ny 10:30 samy nivantana manohitra ny fitondrana miaramila sy Tantawi daholo. Tsy mila fitsarana miaramila #NoSCAF”
Mitondra izay fanampim-baovao farany  ilay mpianatra sady mafàna fo, Noor Noor (@noornoor1) mikasika ny mahazo ireo telo miatrika fanadihadiana:
“Vao avy nivoaka avy tao ny mpisolovava ary niteny fa tsy nisy “fanafihadiana ofisialy” nosokafana momba an'i reem. Hossam, na nabil”
Sarah Carr (@sarahcarr), mpanao gazety, mafàna fo, dia nanolotra saripika lafatra tokoa mikasika ilay fihetsiketsehana ao amin'ny kaonty flickr-ny .
Tamin'ny mitataovovonana, ilay nanomboka taminà toa fiantsoana tsotra hanaovana fanadihadiana dia nivadika ho “fifanakalozan-dresaka tsy ofisialy” ary i Maged, El-Hamalawy, sy Sharaf El Din dia navotsotra tsy nisy fiampangàna. Nitanisa ny fifamorian-dry zareo sy ny hiakany mafy manohitra ny eritretritra hametraka Ejipta fehezinà Miaramila ireo mpanao hetsi-panoherana ho toy ny anton'ny namotsorana ireo olona telo.
Gigi Ibrahim (@GSquare86) manamafy hoe :
“Twitter + Media + vahoaka an-dalambe no namadika fanontaniana iray ho lasa ‘fifanakalozan-dresaka’ .. ny herin'ny vahoaka no tena ilaintsika..fanantenana ho an'ny revolisiona na rivo-piovàna“
Ary na dia i El-Hamalawy izy tenany aza dia toa tahaka ny mizara ity fihevitra ity  ao amin'ny kaonty Twitter-ny @3arabawy:
Ary azoko antoka fa ny hetsika androany, sy ny fanentanam-bahoaka, no hany antony nahatafavoaka ahy androany.
Na dia votsotra aza izy telo ireo, milaza ilay mafàna fo fa hanohy hiasa ry zareo ho an'ny zon'ireo sivily Ejiptiana an'aliny izay nahazo sazy ankamehana avy amin'ny tribonaly miaramila ary ankehitriny any anaty fonja miaramila any. Amin'ny fanaovana izany, ireo mafàna fo ireo dia mankahatra hatrany ilay ambaran'ny fandraharahana ny tafika fa ‘tsipika mena’ ho azy ireo, amin'ny fanambarana fa ny hany ‘Tsipika mena’ aorian'ny Revolisiona ao Ejipta dia tsy maintsy ny vahoaka Ejiptiana irery ihany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/06/03/18078/
 dia niteny fa: https://twitter.com/#!/Gsquare86/status/75529553438720001
 fanampim-baovao farany: https://twitter.com/#!/NoorNoor1/status/75520130414682112
 kaonty flickr-ny: http://www.flickr.com/photos/sarahcarr/sets/72157626729102875/
 manamafy hoe: https://twitter.com/#!/Gsquare86/status/75555369702797312
 ity fihevitra ity: https://twitter.com/#!/3arabawy/status/75553087430983680